Limônady amboarina, mampihena vetivety !
Avoine sy voasarimakirana, mahavery 5 kilao ao anatin’ny 5 andro
Tsy maintsy mitandrina ny sakafo sy manao fampihetseham-batana tsindraindray, raha te hihena. Hanafaingana ny fampihenan-tena atao kosa ny fisotroana zava-pisotro mampihena ary karazany iray tena mandaitra ity atolotra anao ity, satria mety hampihena hatramin’ny 5 kilao ao anatin’ny 5 andro :
Te-hanala « cellulite », ny tokony atao rehetra
Ilay hoditra mitovy endrika amin’ny hodi-boasary amin’ny fe iny no antsoina hoe cellulite. Tena ratsy ery ny fijery azy rehefa hita be izy.
Paquerette : Very 10 kilao tao anatin’ny 5 volana…
Anisan’ny nahita vokatra tamin’ny fampihenan-tena i Paquerette. Very 10 kilao tao anatin’ny 5 volana izy. Araho ny nataony sao mahasoa anao ihany koa.
Paipaika 4 voaporofo ara-tsiantifika fa mampihena
Misy fahazarana kely marom aro mety hanampy hanafaingana ny fampihenan-tena hatao na mifanohitra amin’izay, vao mainka hampitombo
MINCEUR Te-hihena : Tsy ampy raha spaoro fotsiny
Araka ny fanadihadiana iray navoakan’ny American Journal of clinical Nutrition dia tsy ampy hampihenan-tena ny manao spaoro kanefa tsy manamboatra ny fomba fisakafoanana.
MINCEUR Karazana lasopy 6 mitroka tavy sady matsiro
Tsapa ho nidina ny maripana tao anatin'ny andro vitsivitsy izay. Mety tsara noho izany ny mihinana sakafo mafana amin'izay. Raha te hitazon-danja moa dia mety aminao tsara ireto karazana lasopy 5 ireto. Sady mitroka tavy izy ireo kanefa matsiro
Zava-pisotro manala ny tavy eo amin’ny kibo
Ny tavy manodidina ny kibo no tavy sarotra ahintsana indrindra raha mihoatra ireo faritra hafa amin’ny vatana
Manafaingana ny fampihenan-tena hatao ny sakamalaho. Fomba mahomby hihinanana azy ny manao azy ho zava-pisotro. Ireto misy misy karazany roa mandaitra :
Limonady amin’ny sakamalaho sy voasarimakirana
Akora ilaina :
· Sakamalaho 1 sm
· Voasarimakirana 1
Afanaina ny rano 2 kaopy ka rehefa mangotraka dia vonoina ny afo. Alefa ao ny sakamalaho efa nosilantsilahana. Saronana ny vilany dia miandry 5 minitra. Dila izay vao alefa ao ny ranom-boasarimakirana. Sotroina avy hatrany.
Vao mifoha raha mbola tsy misy na inona na inona ao anaty vavony no tena tsara isotroana azy.
Mandaitra izy ity satria mampiakatra ny maripana ao anaty ity dite ity noho ny fiasan’ny sakamalaho, noho ny hafanan’ilay zava-pisotro ihany koa ary ny otrikaina entin’ny voasarimakirana. Manafaingana ny metabolisma sady mandoro kaloria izy ity. Be mpanala arafesina koa ny voasarimakirana . Ankoatra izay dia manadio ny taova ao anaty no manala ny mibontsina amin’ny kibo ihany koa izy ity.
Saosy vinaingitra amin’ny sakamalaho
· Sakamalaho vovony na tsotra
Voasana ny sakamalaho dia totoina amin’ny mixeur miaraka amin’n y ranom-boasarimakirana. Io no hanomezan-tsiro ny salady.